Guulo wax-ku-ool ah oo Golaha degmada Qardho gaarey muddooyinkii ugu dambeeyey [Daraasad Gaar ah] | SAHAN ONLINE
Guulo wax-ku-ool ah oo Golaha degmada Qardho gaarey muddooyinkii ugu dambeeyey [Daraasad Gaar ah]
GAROOWE-Qardho waxay ahayd degmo ka tirsan gobbolkii hore ee Bar, inta aaney noqon magaalo-madaxda gobbolka Karkaar oo ah ka 7aad ee mandiqadda punland. Waxay xuduud la leedahay gobbollada Bari, sanaag-bari, Sool iyo Nugaal. Golaha Degmada Qardho waxa la dhisay 2005tii, xilligiisuna ahaa muddo afar sano ah. Wuxu noqday golaha degmo oo keliya oo ka gudbey caqabado fara badan oo kuwii dhiggiisa ahaa la degey. Muddadii Astaynta Tiirarka Nabadda la samaynayey waxa fiiro gaar la siiyey in wax looga ogaado guulaha degmadu gaartey loona barbar dhigo 14kii degmo oo kale ee sahaminta lagu soo maray.